I-Downhole Motor, i-Drill Bits, izixhobo zokubhola-i-DeepFast
Izibonelelo zePDC zezoBuchule
Sineendlela ezahlukeneyo zokuyila isixhobo sokugrumba kunye nesoftware yovavanyo, esenza uyilo lwayo kunye nenkqubo yovavanyo olunoyilo olomeleleyo kunye nokwenza ngcono izinto.
Qhuba uyilo lweBit
I-DeepFast ixhotyiswe ngenkqubo ye-CAD / ye-CAM edityanisiweyo enokuzimela ngokuzimeleyo kuyo yonke inkqubo yoyilo lwe-drill. Itekhnoloji ephezulu isetyenziselwa uyilo lwento encinci.
Uhlalutyo lwaMandla eBlade
Isoftware yethu yekhompyuter inikezelwe ekulingiseni isuntswana lokulinganisa phantsi kweemeko ezimbaxa zokugrumba. Ivumela iinjineli zesicelo ukuba ziqhubekeke kwimodeli ye-3D yesuntsu lokumba.
Isoftware yekhompyuter yethu ilungele nayiphi na indawo yeoyile kunye negesi emhlabeni, ngokusebenzisa itemplate eyakhelweyo ukuvelisa imizobo eyahlukeneyo kunye nemisebenzi yokunika ingxelo yedatha.
Uhlalutyo lweHydraulic Hydraulic
I-DeepFast isebenzisa isoftware yeCFD eqhubela phambili ukubala ngokwamanani okuhamba-ntathu kwebhithi ye-PDC. Ngokulinganisa kwidijithali, ulwakhiwo lwe-hydraulic yesixhobo sokugrumba sihleliwe.
I-DeepFast yinkampani kawonke-wonke eqinisekisiweyo ye-API enamalungelo awodwa omenzi wechiza. Okwangoku, sineemveliso ezintsha ezinje ngeDual Drill Accelerator, Micro Core bit, Modular bit njl.
Ukuza kuthi ga ngoku, sibonelele ngeenkonzo kwi-Wells ezingaphezu kwe-10000, kwaye sizibophelele ekuphuculeni izinga lokungena, ukonga iindleko zabaqhubi kuwo onke amacandelo aphambili eoyile kunye negesi kunye nokufezekisa ukusebenza okungcono kwihlabathi liphela.
IJamani yeTekhnoloji yezeMoto
Iirubber iikhompawundi ngezinto zokuqala zokwenza izinto.
Iveliswe ngoomatshini be-state-of-the-art ngokuqinisekisa komgangatho oqhubekayo.
Iifomathi eziphambili zemisebenzi ecelomngeni.
Inaliti yelizwe yobugcisa.
Iirubber Stators kunye neerotors ziyile ngokusekwe kwimigaqo yemathematics.
Ukuphuculwa kokuziphatha okuguqukayo kwecandelo lamandla.
Ukucaciswa kwemathiriyeli kuphezulu kunesiqhelo.
Ukusetyenziswa ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-1000.
Ulawulo olugqwesileyo lokuhanjiswa kweenkonzo.
Isebe elifanelekileyo loyilo.
Ukucinga okujolise kubathengi kunye namava abanzi ezinto ezikhoyo ezinje ngeerotors kunye nemimiselo.
Siluqalisile uphando, uphuhliso, ukwenziwa kunye nokusetyenziswa kokusebenza kweemoto ezisezantsi.
Sineemveliso ezintsha ezinje ngeDual Drill Accelerator, iMicro Core bit, iModyuli encinci njl.
Chinese Professional Drilling Bit Ubungakanani Oil Wel ...
Kwi-rebound yayo ukusuka kwi-2020 ukwehla, ixabiso le-Brent lathandana ne- $ 70 / bbl. Amaxabiso aphezulu ngo-2021 athetha ukuhamba kwemali okuphezulu kwabavelisi, mhlawumbi nokubeka irekhodi phezulu. Kule meko, ukubonelelwa ngezixhobo zendalo kwihlabathi liphela uWood Mackenzie uthe abaqhubi kufuneka balumke. "Ngelixa ixabiso ...
IHOUSTON- Inkampani yaseHalliburton yazisa ngeCrush & Shear Hybrid Drill Bit, itekhnoloji entsha edibanisa ukusebenza kakuhle kwabasiki bemveli be-PDC ngobuchule bokunciphisa amandla e-rolling element ukunyusa ukusebenza kokomba kunye nokunyusa uzinzo kancinci ngokutshintsha kwezinto. Cu ...